Maxaad ka taqaan taariikhda laacibkii xulka qaranka ee Mukhtaar Cuti?! | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Maxaad ka taqaan taariikhda laacibkii xulka qaranka ee Mukhtaar Cuti?!
Posted by: radio himilo August 17, 2017
Muqdisho – Magaciisu waa Mukhtaar Maxamed Axmed oo ku magac dheer ‘Mukhtaar Cuti’. Waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Carra-guduudda oo markii danbe loo bixiyay ‘Bakaaraha’ kana tirsan degmada Howl-wadaag ee gobalka Banaadir.
Previous: Coutinho iyo Dembele oo ku dhow inay ku biiraan Barcelona.